Tababare Sir Alex Ferguson Oo Ku Eedeeyay Luis Nani Guuldaradii Ka Soo Gaartay Chelsea.
Tababaraha kooxda Manchester United Sir Alex Ferguson ayaa dusha ka saaray eeda guuldaradii ka soo gaartay Chelsea ee koobka Capital One ciyaaryahanka reer Portugal Nani.
Kooxda martida aheyd ayaa hogaanka ciyaartay qabatay seddex jeer, iyagoo ku hogaaminayay 3-2 ilaa iyo dhamaadkii 90ka daqiiqo ee ciyaarta markaasoo Nani kubad laga soo qaatay taasoo keentay in weerarkoodii ugu danbeeyay ay ku helaan rigoore oo uu u saxiixay ciyaarta oo ilbiriqsiyo ka dhiman xiddigooda Eden Hazard, islamarkaana ciyaara u dirtay 30 daqiiqo oo dheeri ah.
Blues ayaana ku badisay ciyaarta 5-4, waxaana Sir Alex Ferguson uu far muuqay in Nani uu qeyb weyn ka qaatay in kooxdiisa ay guul ka soo qaadan weyso Stamford Bridge mar kale.
“Goolka seddexaad ee dhaliyeen inaga ayaa kubada iska dhiibnay, anagoo ciyaarta koontaroolkeeda heyna islamarkaana kubad fiican ciyaareyna” ayuu Sir Alex u sheegay Sky Sports.
“Waxa kaliya aan u baahneyn ayaa aheyd inaan kubada heysano ilaa seeriga laga yeerinayo. Nani ayaa go’aansado inuu isku dayo inuu u ganbiyo ciyaaryahan, waxaana laga qaatay kubada, ka dibna rigoorada ayaa timid. Ma aqaano hadii ay rigoore aheyd iyo hadii kale. Waxaan qabaa in markaas ka dib ay ciyaartoydeena da’da yar xaalada ku adkaatay 30kii daqiiqo ee dheeriga ahaa.
“Nani waa ciyaaryahan qibrad leh, waa ciyaaryahan doonaya inuu u ganbiyo ciyaartoyda kale, mana ka celineyno sidaas, laakiin xaaladaas oo kale hadii uu kubada koonerka ku heysan lahaa, ciyaarta waa ay dhamaan laheyd.”
Karim Benzema Oo Labo Gool Dhaliyay Xilli Real Madrid Ay 4-1 Ku Dardartay Kooxda Alcoyano.
Real Madrid ayaa 4-1 ku dardartay kooxda heerka seddexaad ee Alcoyano lugta hore wareega 32da ee Cop del Rey ciyaar ka dhacday El Callao Stadium.
Jose Mourinho ayaa nasasiiyay inta badan xiddigahiisa kulankaan, iyadoo Michael Essien iyo Varane ay ahaayeen ciyaartoyda ka badbaaday in la nasasiiyo ee ciyaaray kulankii ugu danbeeyay ee horyaalka ee ay 5-0 kaga badiyeen Real Mallorca.
Waxaana ay taasi keentay in ciyaartoyda sida Kaka, Benzema iyo Jose Callejon fursad loo siiyo inay ku soo laabtaan line-upka kooxda.
Los Blancos ayaa qeybtii hore ku marsiisay kooxda Alcoyano 2-0, iyagoo uga mahadcelinaya goolal ay u dhaliyeen Karim Benzema iyo Kaka.
17 jirka Jose Rodriguez ayaana u seddexeeyay kooxda heysata horyaalka La Liga, ka hor inta uusan Karim Benzema dhalinin goolkiisii labaad ee ciyaarta ka dib markii Javi Lara uu laad xor ah u dhaliyay kooxda martida loo ahaa.
Alcoyano ayaa wada dheer ay sugeysaa marka ay Santiago Bernabeu booqnayaan lugta labaad bishaan gudaheeda.
Leeds v Chelsea, Bradford v Arsenal – Isku Aadka Wareega 8da Capital One Cup Oo La Soo Saaray.
Chelsea ayaa u safri doonta Leeds wareega 8da ee Capital One Cup ka dib markii Manchester United ku garaaceen wareega 16ka kooxood ciyaar xiiso laheyd oo la iska dhaliyay sagaal gool.
Blues ayaa ku badisay 5-4 kulan la ciyaaray 12o daqiiqo oo xiiso lahaa oo ka dhacay Stamford Bridge.
Arsenal ayaa iyagana guushoodii xusuusta laheyd ee 120ka daqiiqo ka dib ay ka gaareen Reading waxa ay ku heleen inay u safraan kooxda Bradford ee horyaalada hoose ee Ingariiska.
Isku aadka wareega 8da koobka Capital One Cup:
Juventus Iyo Inter Milan Oo Guulo Gaaray, Napoli Iyo Roma Oo Laga Badiyay, Lazio Oo Lagu Dhegay.
Gool soo daahay oo uu u dhaliyay Paul Pogba oo Juventus u sahlay inay 2-1 kaga talaabsadaan kooxda Bologna, islamarkaana sii dheereystaan hogaankooda Serie A iyo kulamada aan weli dhinaca dhulka loo dhigin horyaalka Serie A.
Pogba ayaa u muuqday qeybtii hore ee ciyaarta inuu hogaanka u dhiibay Juventus, iyadoo kooner ay soo tuurtay Juventus uu shabaqa dhex dhigay Pogba laakiin waxaa goolkaas lagu diiday madaama uu riixay Marco Motta.
Pogba oo ciyaarta si aad ah uga dhex muuqday ayaa seddex daqiiqo ka dib ku dhawaaday inuu shabaqa soo taabto, laakiin xilligaan waxaa goolka ka diiday birta oo uu ku dhuftay.
Bologna ayaa iyadana kubad la helay shabaqa 18 daqiiqo ka dib, laakiin garsooraha ayaa sii yeeriyay seeriga madaama qalad ay galeen Bologna intii ay ku jireen dhismaha goolkaas.
Juventus ayaa ugu danbeyn qeybtii labaad heshay goolkii ay raadinayeen. Kubadii uu keenay Pogba ayaa waxaa soo dejiyay Giaccherini iyadoo Quagliarella uu shabaqa ku hubsaday.
Bologna ayaana heshay barbaro lama filaan ah markii kubad liitada uu iska bixiyay Paolo De Ceglie, waxaana ay kubada ku duldhacday cagta Taider kaasoo aan waqti ku dhuminin inuu kubada ku hubsado shabaqa.
Waxaana ay ciyaarta u muuqatay mid ku sii jeeda inay ku dhamaaneyso barbaro 1-1 ah, lakiin daqiiqadii 2aad ee ciyaarta lagu daray ayaa karoos uu keenay Sebastian Giovinco waxaa shabaqa ku hubsaday Paul Pogba kaasoo seddex dhibcood oo muhim ah gacanta u geliyay kooxdiisa.
Dhanka kale Inter Milan ayaa soo gashay kaalinta labaad ka dib markii ay 3-2 ugu awood sheegatay kooxda Sampdoria oo marti ugu aheyd San Siro.
Munari ayaa hogaanka u dhiibay Sampdoria ka hor inta uusan casaan ka qaadan Costa, waxaana Inter u barbareeyay Milito oo u dhaliyay gool rigoore ahaa.
Palacio ayaana ka saaciday inay Inter qabato hogaanka markii uu saxiixay goolka labaad ee ciyaarta, iyadoo Guardin uu ciyaarta hurdo u diray markii uu dhaliyay goolka seddexaad ee ciyaarta.
Laakiin Sampdoria oo inta badan qeybtii labaad 10 ciyaaryahan ku ciyaareysay gool soo ceshatay dhamaadkii ciyaarta.
Waxaana guushaan ay Inter ka saaciday inay soo galaan kaalinta labaad ee kala sareynta Serie A iyagoo leh 24 dhibcood, islamarkaan afar dhibcood ka hooseeya kooxda hogaanka heysa ee Juventus.
Napoli ayaa u dhacday kaalinta 3aad ka dib markii guuldarro 1-0 ay ka soo gaartay Atlanta, waxaana ay leeyihiin 22 dhibcood.
Lazio oo iyadana barbaro 1-1 ah la galay kooxda Torino ayaa ku jirta kaalinta 4aad iyagoo leh 19 dhibcood.
Roma oo ku jirta kaalinta 7aad islamarkaana leh 14 dhibcood ayaa xaalka uu ku xun yahay ka dib markii guuldarro 3-2 ay ka soo gaartay Parma.
Lionel Messi Oo Sheegay Inuu Ka Daalay Isbarbardhiga Had Iyo Jeer Lagu Sameeyo Isaga Iyo Ronaldo.
Lionel Messi ayaa sheegtay inuu ka daalay isbarbardhiga mar walba lagu sameeyo isaga iyo xiddiga Real Madrid Cristiano Ronaldo.
24 saacadood ka dib markii labada ciyaaryahan ay qeyb ka noqdeen ciyaartoyda 23ka ee isagu soo haray tartanka FIFA Ballon d’Or, xiddiga reer Argentina ayaa shaaca ka qaaday inuusan shaqsi ahaan xafiiltan kala dhaxeynin ciyaaryahankii hore ee Manchester United.
“Wax i quseeya ma ahan waxa uu Ronaldo sameeyo ama uu dareemo” ayuu Messi u sheegay France Football.
“Xaqiiqdii, waxba igama gelin. Waxa uu sameyn karaa wixii uu doono.
“Marka ay wax dhacaan joornaaliistayaasha waxa ay mar walba ay raadinayaan inay isku kaaya barbardhigaan. Waxa ay mar walba doonayaa inuu tartan na dhexyaalo. Waan ka yara daalay gabi ahaanba.”
Waxa uu Messi sidoo kale fekrad ku darsaday abaalmarinta Ballon d’Or isagoo sheegay inay tahay inaan la ilaawin goolhaye Iker Casillas.
“Ma ilaawi kartid Casillas” ayuu yiri. “Aniga waxa uu ii yahay goolhaye adag. Waxa uu ciyaaryahan muhim ah u yahay Real Madrid, aniga ahaana waxaa u heystaa inuu yahay mid ka mid ah goolhayayaasha ugu fiican adduunka, hadii uusanba aheyn midka ugu fiican.”
Video: Giroud Iyo Coquelin Oo Maaliyado Ay Bixiyeen Dib U Weydiistay Taageerayaashii Ay Siiyeen.
Kulankii xalay ee Capital One Cup ee dhexmaray kooxaha Reading iyo Arsenal ayaa ahaa mid taariikh reebay iyadoo afar gool oo looga hormaray Arsenal ay ka soo kabsatay islamarkaana barbareeyeen, taasoo keentay in 30 daqiiqo oo dheeri ah lagu darro islamarkaana ay 7-5 ay ku garaacaan.
Laakiin goolasha badnaa ee la iska dhaliyay kaliya daawadayaasha kuma aysan jahwareerin sidoo kale ciyaartoyda ayaa iyaga laftooda ku jahwareeray.
Weeraryahanka cusub ee Arsenal Olivier Giroud iyo Coquelin ayaa markii 90ka daqiiqo ay ku dhamaatay 4-4 waxa ay u maleeyeen in ciyaarta lagu kala baxay, waxaana ay iska bixiyeen maaliyadaha iyagoo u tuuray taageerayaasha.
Laakiin kulanka Capital One oo aan aheyn mid lagu kala baxo labo lug ayaa waxa ay keentay in taageerayaasha qaar ay ogeysiiyaan labada ciyaaryahan in ciyaarta aysan weli dhamaan, waxaana ciyaaryahanada u yimid mid ka mid ah shaqaalaha kursiga keydka kaasoo ogeysiiyay in ciyaarta aan weli lagu kala bixin.
Nasiib wanaag waxa ay labada ciyaaryahan dib u heleen islamarkiiba maaliyadahooda oo ay iska soo dhiibeen taageerayaashii nasiibka u yeeshay inay qabsadaan markii loo soo tuuray.
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Iyo Xamaasada Leh Ee Koobka Capital One Ee Chelsea v Man United.
Kulanka: Chelsea v Manchester United
Kooxda Chelsea iyo tababarahooda Roberto Di Matteo ayaa aarsasho u jeeda kulanka caawa ay Stamford Bridge ku martigelinayaan kooxda Manchester United, inkastoo la filayo in labada kooxood aysan la soo shirtagi doonin line-upkooda ugu adag madaama koobka ay ciyaarayaan uu yahay Capital One Cup.
Manchester United ayaa 10 sanno ka dib kulan horyaalka ah axadii ku badisay Stamford Bridge inkastoo kulankaas uu hareeyay muran badan, laakiin kooxda macalin Sir Alex Ferguson ayaa iyagana u baahnaan doona caawa inay cadeeyaan inay mar kale guul ku gaari karaan Stamford Bridge isbuuc gudahiisa.
Ciyaarta caawa ayaa xamaasada ku hareereysan waxa ay noqon doontaa mid aad u sareysa, iyadoo labada kooxood ay xurguf weyn kala dhex gaartay kulankii axada ee Premier League, Chelsea ayaa sida ay hore u sheegtay talaabo dheeraad ah oo dhanka amaanka ah qaadi doonta, madaama garoonka la soo buuxin doono oo la wada iibsaday tikidhada ciyaarta.
Ciyaartii axada waxaa muranka weyn dhaliyay garsoore Clattenburg oo isaga haatan dacwad loo heysto oo la xiriirta inuu hadalo aan habooneyn u isticmaalay John Obi Mikel iyo Juan Mata, laakiin taas waxaa sii dheereyd muran ka dhashay casaankii la siiyay Fernando Torres iyo goolkii guusha ee uu dhaliyay Javier Hernandez Chicharito.
Vermijl,� M Keane, Wooton, Buttner
Nani,� Powell,�Fletcher, Scholes,�Anderson
Branislav Ivanovic iyo Fernando Torres ayaa kulankaan ka maqnaan doona Chelsea ka dib markii labadoodaba ay casaan qaateen kulankii Manchester United ee ay la ciyaareen axadii ee Premier League.
Kabtan John Terry ayaa weli isaga ganaax ku maqan, ka dib markii ganaax afar kulan ah garka loo geliyay isagoo lagu helay inuu cunsurinimo ku aflagaadeeyay Anton Ferdinand.
Frank Lampard oo dhaawac ahaa ayaan loo qaban muddo uu ku soo laaban karo, waxaana ay u badan tahay inuu seegi doono ama inuusan ku soo bilaaban kulanka caawa ee Capital One Cup.
Manchester United waxaa weli ka maqan kabtankooda Nemanja Vidic iyo Phil Jones, halka Chris Smalling ay isaga u badan tahay inuu soo laaban karo kulanka Arsenal ee isbuuca soo socda.
Sir Alex Ferguson ayaa laga yaabaa inuu la soo shirtago daafacyo la mid ah kuwii uu la soo shirtagay kulankii Newcastle ee koobkan Capital One, iyadoo ay u badan tahay inay ciyaari doonaan Scott Wooton, Michael Keane, Alexander Buttner iyo Marnick Vermijl.
Shinji Kagawa ayaa isna ka maqnaan doona kooxda martida ah ka dib dhaawac jilibka ah oo ka soo gaaray kulankii Braga.
Chelsea ayaa ku guuleysatay kulankii ugu danbeeyay ee ay labada kooxood isaga horyimaadeen League Cup 2–5tii, iyagoo labadii lug ku badiyay 2-1.
Inkastoo weli ay hogaanka u hayaan Premier League, Chelsea ayaa haatan laga badiyay labadii kulan ee ugu danbeysay ee Shakhtar Donestk iyo Manchester United.
Man United ayaa hogaanka qabatay qeybta hore ee ciyaar kaliya shan kulan 13kii kulan ee ay ciyaareen xilli ciyaareedkan, laakiin waa ay wada badiyeen shantaas kulan.
Chicharito ayaa shabaqa ka soo taabtay Chelsea shan kulan oo ka mid ah sideedii kulan ee uu ka horyimid Chelsea isagoo u ciyaara Shayaadiinta Cas Cas, waxaana ku jira goolkii guusha ee axada.
Kooxda Sir Alex Ferguson ayaa badisay shantii kulan ee ugu danbeysay tartamada oo dhan, seddex ka mid ah waxa ay ku badisay iyadoo marti ah.
Chelsea iyo Man United midkoodna shabaqa waa ilaashan weysay seddexdii kulan ee ugu danbeysay, seddexdaas kulan ee ugu danbeysay Chelsea waxaa laga dhaliyay 7 gool, halka United laga dhaliyay lix gool.
Robin van Persie ayaa lix jeer gool ku dhaliyay Stamford Bridge, isaga ayaana haya rikoorka ciyaaryahan marti ku ah garoonkaas ee goolasha ugu badan ku dhaliyay.
Carlo Ancelotti: Zlatan Ibrahimovic Waa Ku Guuleysan Karaa Abaalmarinta Fifa Ballon d’Or.
Macalinka kooxda Paris Saint-GermainCarlo Ancelotti ayaa niyad wanaag ka qaba in Zlatan Ibrahimovic uu fursad u heysto inuu ku guuleysto Ballon d’Or xilli ciyaareedyada soo socda, laakiin waxa uu qirtay in Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo in midkood ay u badan tahay inuu sannad ku guuleysto.
31 jirka weerarka ka ciyaara ee reer Sweden ayaa horyaalo badan ka soo qaaday wadamo kala duwan oo adduunka ah, waxaana mustaqbalkiisa ciyaareed ee PSG uu ku bilaabay qaab ciyaareed wanaagsan isagoo u dhaliyay 10 gool sagaal kulan oo uu u saftay.
Ancelotti ayaa aaminsan in ciyaaryahanka uu fursad fiican u heysan doono inuu ku guuleysto Ballon d’Or hadii ay xilli ciyaareedkaan wax ku guuleystaan, iyadoo kooxda PSG ay haatan hogaanka u heyso Ligue 1.
“Waxaan qabaa in Ibra uu ku guuleysan karo Ballon d’Or” ayuu Ancelotti u sheegay suxufiyiinta.
“Laakiin weli waxa uu waqti u heystaa inuu ku guuleysto. Xilli ciyaareedkii hore waxba kuma uusan guuleysan. Waana sababta uu fursado fiican u heli karo sannadaha soo socda.”
Markii la weydiiyay cida uu aaminsan yahay in Ballon d’Or ay ku guuleysan doonto sannadkan, Ancelotti ayaa ku faraxsanaa inuu fekerkiisa la wadaago dadka kale.
Arsenal Oo Ka Soo Kabsatay Afar Gool Oo Looga Hormaray, Islamarkaana 7-5 Ku Garaacday Reading.
Geesinimada Theo Walcott ayaa Arsenal ku dhiirogelisay soo laabasho aan caadi aheyn, iyagoo ka soo kabsaday afar gool oo looga hormaray iyagoo islamarkaana 7-5 ku garaacay kooxda Reading oo marti loo ahaa, ciyaar xamaasad leh oo dhexmartay labada kooxood.
Tababare Arsene Wenger ayaa inta badan bedel ku sameeyay ciyaartoydiisa joogta ah, isagoo soo safay ciyaaryahano da’ yar iyo kuwa inta badan kursiga keydka saaxiib la ah, halka Reading ay iyagana nasasiisteen 6 ciyaaryahan o ciyaaray kulankoodii ugu danbeeyay ee Premier League.
Goolal ay qeybtii hore kala dhaliyeen Jason Roberts, Mikele Leigertwood, Noel Hunt iyo gool uu iska dhaliyay Laurent Koscielny ayaana hogaanka u dhiibay kooxda Reading taasoo u muuqatay inay ciyaarta hurdo u dirtay xilli horeba.
Laakiin labo gool oo ka yimid Walcott, iyo goolal kale oo ay kala dhaliyeen Olivier Giroud oo bedel ku soo galay iyo Koscielny ayaa ciyaarta ku qasbay inay barbaro noqoto oo lagu darro 30 daqiiqo oo dheeri ah.
Marouane Chamakh ayaana Gunners hogaanka ugu dhiibay gool shanaad intii ay socotay 30kii daqiiqo ee dheeriga ahaa, laakiin ciyaaryahanka Reading Pavel Pogrebnyak oo bedel ku soo galay ayaana madax ugu barbareeyay kooxdiisa, taasoo ka dhigtay in ciyaarta ay u socoto rigoore.
Laakiin mar kale waxaa lagu badbaaday Walcott oo dhameystirtay seddexleydiisa, halka Chamakh uu isna dhaliyay goolkii 7aad, taasoo u xaqiijisay Arsenal guul ay u dagaalantay ka dib inay u gudbaan wareega 8da ee koobka Capital One.